Kurumidza shandura pakati peakasiyana mafomati emifananidzo neCreative Convert | Ndinobva mac
Kuti tigovane mifananidzo neshamwari dzedu uye mhuri, zvingangoita kuti vamwe vavo, kana kunyangwe isu, hatina chishandiso chinotibvumidza kuwana gwaro kana mufananidzo watakatambira. Izvo zvakare zvinogona kuti uyo anogamuchira haana muoni anoenderana neiyo fomati, saka kana tikazvitumira izvo zvatoshandurwa kuita fomati inozivikanwa, zvese zvirinani.
Kunyange chiri chokwadi kuti ese ekugadzirisa kana ekunyora kunyorera, uve nechishandiso chekuburitsa zvirimo kune mamwe mafomati anoenderanaMaitiro ekuzviita, kunyanya kana paine mifananidzo yakawanda yekushandura, inogona kutora nguva yakareba. Kuti tideredze nguva yekushandurwa, tinogona kushandisa iyo Creative Convert application, application yatinogona kushandura iyo PDF, EPS uye Adobe Photoshop uye Adobe Illustrator kuita JPG, PNG, BMP, TIFF, JPG uye PSD.
Izvo zvinofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti kana uchichinja mafaera kuita maPDF, EPS, PSD uye maAi mafomati, zvese zvinhu zvinogona kugadziriswa nesoftware yavakagadzirwa haichazowanikwazve, saka kana tikatsvaga kuita kutendeuka kudzikisa saizi refaira kuti ugone kuigovana, iyi haisiyo mhinduro yatiri kutsvaga.
Kana, kune rumwe rutivi, isu tichingoda chete kuratidza mhedzisiro yekupedzisira yeprojekti yedu, kuishandura kuti ideredze nzvimbo yayo uye kudzivirira uyo anogamuchira kubva pakugadzirisa zvavanoda, kuchinjira kune iyi mhando yemafomati. kana iri mhinduro yatiri kutsvaga.
NeConvert Convert, hazvidiwe chero nguva kuti isu tine chero ekushandisa yemafomati ayo isu atinoda kushandura kuti tiite maitiro, chimwe chinhu chinofanirwa kutendwa mumhando iyi yekushandisa, sezvo mazhinji acho, kana achida kuti tiiswe pakombuta yedu.
Creative Convert ine mutengo muMac App Store ye2,29 euros, inoda OS X 10.11 uye inotsigira 64-bit processor.
Kugadzira Shanduko0,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Kurumidza kushandura pakati pemhando dzakasiyana dzemifananidzo neCreative Convert
Intel Power Gadget, zvakare inowanikwa yeMacOS